Global Voices teny Malagasy » Shina: Misedra olana ny “Vita avy any Shina” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Septambra 2008 4:32 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika avylavitra
Sokajy: Shina, Sakafo, Tanora, Tontolo_iainana, Vaovao Mafana
Tsy mitsaha-mitombo isan’andro ny hatezerana vokatr’ilay vovo-dronono voapoizina. Ankoatry Sanlu (三鹿), ny fandraharahàna ankapobeny misahana ny fanaraha-maso ny kalitao, ny Fitsirihana ary ny Fisorohana eto amin’ny Repoblika Entim-bahoakan’i Shina koa (國家質檢總局) dia nampahafantra tamin’ny 16 septambra fa ampahadimin’ny mpamokatra vovo-dronono natao ho an’ny zazakely eto amin’ny firenena no voarohirohy amin’ilay tantara ratsin’ny melamine. Orinasa mpanodina ronono miisa 22, ka isan’izany ireo vokatra anatiny toy ny Yili (伊利) sy ny Meng Niu (蒙牛), no voarohirohy ho mamokatra vovo-dronono voapoizina. Hatreto, 6 244 raha kely indrindra ny zazakely tratry ny aretin’ny vato any amin’ny voa (calculs rénaux).
Ho fanohizana ny hafatra nalefan’i I-fan  sy Bob Chen , ity misy fanampim-baovao mikasika ny fahatsapan’ny olona any Shina.
Aza mividy ny “Vita avy any Shina”
Nahatohina an’i William Iong ny sivana nampiharina tamin’ny aterineto nandritra ity olana ity, ka hoy indrindra izy niangavy : raha tena tianao marina ity firenena ity, miangavy indrindra aza mividy ny “Vita avy any Shina” 
Androany, nangatahana aho hamàfa hafatra iray tao amin’ny blaogiko mikasika ny olan’ny vovo-drononon’ny Sanlu. Tena matanjaka marina ny sampana fifandraisana ao amin’ity orinasa ity, tsy endriky ny lafatra ho an’ny fandraharahana sinoa ve izany ? Ampifamatorina ny tombontsoan’ny orinasa sy ny an’ny governemanta ary dia ampiasaina ny tanjaky ny fifandraisan’ny governemanta mba ho solon’ny sampana fifandraisana ho an’ny orinasa hamafàna izay rehetra vaovao na fanehoan-kevitra manohintohina ny tombontsoan’ny orinasa. Tena ao anatin’ny heriny tanteraka tokoa ry zareo. Amin’izay ireo rehetra tsy mahalàla ny marina dia hanohy hividy ny ronononao sy mandroso manàtona ny fasana.
Ary hoy ny mpitoraka blaogy manàla azy avy eo:
Ny olana goàvana ho an’i Shina dia mànana olona betsaka nahita fahalalàna isika sady malàlaka amin’ny fisainana, raha maty daholo ireny olona ireny, dia tsy mànana olana intsony isika .
Misy siosion-dresaka fa nampiasa 3 tapitrisa yans ny orinasa ho an’ny atidoha-milina mpikaroka, toa somary nohamaivanintsika ny tanjany, antsasak’io volabe io fotsiny no ilainy dia ampy hanetsehany ny sampana fifandraisana ao amin’ny governemanta.
Raha tena tia tanindrazana tokoa ianao, azafady mba tsarovy, aza mividy mihitsy vokatra “vita avy any Shina”!
Eken’I Shen Yizhe fa mba ho soan’ireo taranaka ho avy, tokony ho sarotiny amin’ny vokatry ny firenentsika isika  :
Raha hitohy toy izao ity tantara ity, dia mety ho very fihinana ireo mpivarotra zava-mahadomelina ary ny fanentanana hiady amin’ny zava-mahadomelina dia hihisaka hankany amin’ny orinasa mpanodina sakafo. Raha nitondra fanamarihana ny Praiminisitr’i Nouvelle-Zélande momba ny fikasan’ny governemantan’y faritanin’i Hebei hanarontsarona ity aferana vovo-dronono voapoizina ity sy hanatarazoka ny fandraofana ireo vokatr’i Sanlu, dia hitantsika soritra teny amin’ny endriny fa tena toa hadalàna sy tsy nampino azy ny zava-misy. Tsy maintsy nitamberina tamintsika ny resaka Japana sy ny ravioli voapoizina, izay mbola tsy fantatra mihitsy ny marina momba azy. Na ny ravioli na ny vovo-dronono voapoizina dia samy avy any amin’ny faritanin’i Hebei avokoa, inoako fa dia anjran’ny japoney indray izao no manao ankivy ireo vokatra sinoa. Raha ity tenin’i twocold,ity no ampiasaina “ny fanaovana ankivy ny vokatra japoney dia fomba hanabarànay ny fihetsem-ponay, fa ny vidin’ny fanohanana ny voka-pirenenay kosa dia ny fahasalamana sy ny ain’ny taranaka ho avy “. Ka iza àry no iray tena mavesa-danja ?
Fa tsy miresaka momba ny ankivy, i Wang Xiaofeng kosa indray dia mampianatra ny mpanjifa sinoa mba hanao kajikajy tsotsotra:
Azafady, kajio tsara mihitsy, rehefa vokatra tsy fahita firy eo amin’ny tontolo voajanahary, nefa ananantsika betsaka eo anivon’ny tsena, dia tokony hitandrina mafy isika. Tena tsy azo inoana mihitsy ny filazana fa tsy nampiana zavatra hafa tao anatiny. Aza mikasika ireo vokatra manindrahindra ny “maitso” na “organika”. Tsy misy tena ronono ao anatin’ny ronono, tsy ahitàna tena voankazo ao anatin’ny ranomboankazo … Indray maka aho nahatsikaritra vokatra avy amin’ny voankazo Tang, tsy nahitàna voankazo mihitsy tao anatin’izay tahàrony. Meteza hanao kajy. Tena voafetra dia voafetra ny voasary eto amin’ny tanintsika, ka avy aiza no nahazoantsika voankazo betsaka hamatsiana ireo orinasa mpanodina sakafo ho an’ny daholobe ? Rehefa mandeha miantsena amin’ireny tsena lehibe ireny aho, ny ankabezan’ny fotoana laniko dia hamakiako ny fitanisàana ireny tahàro. Tsy azoko mihitsy ny aiko, ary miezaka ny tsy mividy ireny vokatra ireny aho.
Nahazo angom-baovao avy ao anatiny momba ny ivon-toerana mikirakira ronono ao Yili any Mongolia Afovoany i Comes Violet (紫罗兰奔你来) mangataka ny mpiasa rehetra ao amin’ilay ivon-toerana hanàla izay rehetra mety ho akora simika toy ny peroxyde d'hydrogène sy ny mélamine, sy koa hamotika ny tahirin-dronono ahitàna amidon sy akora simika hafa.
Manentana ny mpanao gazety rehetra manerana ny firenena sy maneran-tany ny mpanoratra mba handeha ho any Mongolie Afovoany hamaky bantsilana ity tantara ity:
Ny fomba fanao manampoka melamine dia niandoha avy any Shanxi. Tsy dia tsara loatra toy ny kalitaon’ny ronono avy ao Mongolia Afovoany ny rononon-dry zareo, kanefa ny vovo-dronono avy any Mongolia Afovoany dia tsy mahatratra ny fenitra ilaina amin’ny tahan’ny proteina. Etsy andanin’izay, noho ny melamine, tafita amin’ny fitsirihana ny ronono avy any Shanxi. Izay no anton’ilay tsianbaratelon’ny ivon-toerana mamokatra ronono amin’ny fanampohany melamine, amidona sy peroxyde d'hydrogène.
Ankehitriny, ny olana fototra, dia tsy manana mpanao gazety hanadihady ireo mpiompy mpamokatra ronono isika, izay nambaran’izy ireo dia hanamafy izay ambarako. Saingy indrisy, tsy mpanao gazety aho sady tsy nandrakitra ny antsipirihan-javatra.
Ary mba ahoana ny amin’ny vokatra ronono tamin’ny Lalao Olaimpika ?
I Twocold (韓寒) no manamarika fa ny vaovaon’ireo mpampita vaovao nentim-paharazana dia nanoritra hoe tsy voapoizina akory ireo vokatra ronono naroso tamin’ny Lalao Olaimpika :
Tsapako aty am-parany avy amin’ity tranga ity fa tena mahay mandray vahiny tokoa ny firenentsika. Jereo Japana, T*tazoniny ho an’ny terataniny ny vokatra tsara ary aondrany any ivzelany kosa ny sokajy faharoa (ny ratsiratsy kokoa). Ho an’ny tanintsika kosa, ny mifanohitra amin’izay no ataontsika. Tena “fanoherana an’i Japana“ marina tokoa
Kanefa, misalasala i Nickwong ny amin’ny maha-tena ara-pahasalamana tokoa ireo vokatra ronono nandritra ny Lalao Olaimpika :
1.Raha niaiky ny governemanta fa voapoizina tamin’ny melamine koa ny ronono nandritry ny Lalao Olaimpika sy ireo naondrana any ivelany, dia ho lasa olana iraisam-pirenena izy ity. Mino aho fa tsy ho sahy hiaiky izany ry zareo. Na inona na inona ambara, efa lany voatelina aloha ireo vokatra. (Manantena aho fa mba hisy hanara-maso akaiky ny ronono mandritry n y Lalao Paralimpika).
2. Raha ny fanazavan’ny Sanly sy ny governemanta no raisina, dia ny mpamokatra ronono no nanampoka melamine (tena miasa mafy tokoa momba azy io ny mpitandro filaminana) ary dia tsy tratry ny fitsirihana kalitao efa ho 1100 ataon’ny Sanlu, ka ahoana no ahafahany mitompo teny fantatra fa ny vokatr’i Yili nandritry ny Lalao Olaimpika dia tsy nisy melamine?
Manamarika ihany koa ny mpitoraka blaogy fa efa tamin’ny taona 2007 no nisy Tale iray tao amin’ny ivon-toerana nitaraina fa hatramin’ny taona 2005 no efa fanampohana kasinga hafa nataon’ny orinasa tamin’ny ronono, ka isan’ireny ny vovoka proteina sy vovoka tavy. Nefa notsinontsinoavin’ny Yili ny fitarainany.
Iza no hizaka ny vokany ?
Miezaka mampitony ny hatezerana ny governemantan’i Hebei amin’ny alàlan’ny fandraisany an-tànana ny saram-pitsaboana ireo zazakely marary. Na izany aza, manontany tena i Caodan  hoe nahoana no ny mpitondra ao Hebei no hizàka ny vokany eo amin’ny toeran’i Sanlu amin’ity tantara ity :
Tena zavatra mahasoso…, toy ny hoe mba miasa loha ho amin’ny tombotsoam-bahoaka iny ery ny governemanta! Nefa nahoana no tsy maintsy zakain’ny governemanta ny lany rehetra ? Avy aiza no nihavian’ny volan’ny governemanta? Tsy avy amin’ny hetra alohan’ny mpandoa hetra rehetra ve? Nahoana no avela hamàfa ny hadalàn’ny Sanlu amin’ny volantsika ny governemanta ? Sa ny hadalàn’ny governemanta mihitsy io ezahany fafàna ankehitriny io ? Nefa milaza ny governemantan’i Hebei fa tsy manana vola miasa ao amin’ny Sanlu.
Milako ny mpanjifany amin’ny vokatra vokariny ihany ity orinasa ity, tokony ho azy ireo ny fandoavana ny onitra. Fanampin’izany, nahatratra 7 lavitrisa yuans ny vola kirakirany, nahoana no ny governemanta sy ny mpandoa hetra ao Hebei no hizàka ny vokany? Tsy mampino !
Araka ireo vaovao farany, be ireo tomponandraikitra ambony amina antoko tao amin’ny faritanin’i Hebei no nametra-pialàna noho izy ireo voarohirohy amin’ny tantara ratsin’ny vovo-drononon’i Sanlu.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/09/23/1306/
 Bob Chen: https://fr.globalvoicesonline.org/2008/09/16/833/
 raha tena tianao marina ity firenena ity, miangavy indrindra aza mividy ny “Vita avy any Shina”: http://www.williamlong.info/blog/archives/233.html
 tokony ho sarotiny amin’ny vokatry ny firenentsika isika: http://www.my1510.cn/article.php?f7323f64448c5890
 mampianatra ny mpanjifa sinoa : http://www.wangxiaofeng.net/?p=2254
 Nahazo angom-baovao avy ao anatiny momba ny ivon-toerana mikirakira ronono ao Yili any Mongolia Afovoany : http://www.xici.net/b6775/d77365725.htm
 tsy voapoizina akory ireo vokatra ronono naroso tamin’ny Lalao Olaimpika : http://blog.sina.com.cn/s/blog_4701280b0100aor3.html
 misalasala i Nickwong ny amin’ny maha-tena ara-pahasalamana tokoa ireo vokatra ronono nandritra ny Lalao Olaimpika: http://nickwong2.blogspot.com/2008/09/blog-post_17.html
 tamin’ny taona 2007 : http://nc.people.com.cn/GB/61161/5246226.html
 manontany tena i Caodan: http://caodan.org/log/122.html